Kukhalwa ngobugebengu eNhlazatshe | News24
Kukhalwa ngobugebengu eNhlazatshe
USABISA ngokuvala zonke izidleke zewhoonga endaweni yase-Snathing umphakathi waseNhlazatshe kulandela izigameko zakamuva zokuntshontshwa kwezinto endaweni, okusolakala ukuthi zenziwe yiqeqebana labafana babhema iwhoonga endaweni.
La malungu omphakathi atshele i-Echo ukuthi yize ubugebengu buke bathi ukuma kule ndawo, buqale phansi njengoba leli qeqebana elilinganiselwa kubantu abayisihlanu ligasela imizi yabantu ebusuku lintshontsha omabonakude namakhompuyutha.
Athe isigameko sangesonto elidlule, lapho kungenwe emzini womuntu ebusuku, isona esiholele ekutheni umsolwa atholakale endaweni yaseSnathing.
“Bekulokhu kuntshontshwa izinto ezifana nomabonakude, kodwa singazi ukuthi lezi zigebengu ziqhamukaphi.
“Lezi zigilamkhuba bezikwazi ukungena ngale minyango ephushwayo (sliding doors) futhi kulula ukungena kule mizi enamafasitela e-aluminium.
“Ngesonto eledlule esinye salezi gilamkhuba singene komunye umuzi ebusuku okuthe uma bephaphama sabaleka sashiya umakhalekhukhwini. Iwona lo makhalekhukhwini esikwaze ukuthola ngawo ukuthi umsolwa owase-Snathing.
“Simthumele umyalezo, sazenza umngani wakhe lapho sifike sathola nokuthi kubo kulaphi.
“Sifikile kubo sazama ukukhuluma naye, okugcine ngokuthi kulamule amaphoyisa ngoba bese sibhodloze nomnyango bengafuni singene.
“Yize umsolwa evumile wabala nabanye asebenzisana nabo, sishaqekile uma sifika esiteshini samaphoyisa i-Plessislaer sithola ukuthi umsolwa udedeliwe. Siphindelile esiteshini siyofuna incazelo kodwa satshelwa ukuthi amaphoyisa asephinde ambopha umsolwa,” kusho omunye etshela leli phephandaba.
Elinye futhi ilungu lo mphakathi nalo elingathandanga ukudalulwa igama lithe njengomphakathi sebekhethe ukuthi bazibambele umthetho ngezandla, njengoba amaphoyisa ephuza ukusukuma uma bewabikela.
“Sizimisele ngokuvala zonke izidleke ze whoonga kule ndawo ngoba izona lezi ezidala ukuthi abantu bantshontshe ngoba beswele imali.
“Asisho ukuthi eNhlazatshe azikho izidleke zewhoonga kodwa nazo zizovela emva kokuba sesivale ezakule ndawo.”
Kusenjalo endaweni yase-Sigingqini kuyona le ndawo amalungu omphakathi athi awalalanga ngoMsombuluko ebusuku emva kokuba umphakathi ubujaha izigebengu ebezibaleka nothayela abahlanu abebebekwe ngaphadle komuzi womuntu.
Umdlali wesigingci owaziwayo waseNhlazatshe uZazi Mncube usanda kudutshulwa ebanjwa inkunzi kanti lokhu kwenzeka nje wayengenelwe izigebengu indlini zathatha umakhal’ekhukhwini wakhe.
Ikhansela lakwa ward 11 uMnu Sipho Madonda uthe uyazi ngalezi zigameko futhi bahlangene nezinhlaka ezibhekelene nokuphepha komphakathi ukuze kukhulunywe ngezindlela okungancishiswa ngazo ubugebengu.
Okhulumela amaphoyisa kwi Plessislaer Cluster uNkk Thokozani Moleko ukuqinisekisile ukuthi akhona amacala obugebengu avuliwe kule ndawo, wakhuthaza amalungu omphakathi ukuba abike emaphoyiseni izigilamkhuba kunokuthi azibambele wona umthetho ngezandla